Breakeracre Apartment - I-Airbnb
Igumbi lokulala eli-2 elivaliweyo elijonge kwipaki njengendawo engqongileyo kunye nembono ye-Oakura Beach kunye noLwandle lweTasman. Uhambo olufutshane kakhulu luya kuba nesanti phakathi kweenzwane zakho kunye / okanye ukudipha elwandle.
Ukungena kule ndlu kungena ngomnyango wakho wangaphambili kunye nebhokisi yokutshixa ngaphandle ebambe isitshixo.
Le ndlu inamagumbi okulala ama-2 amahle, omabini anewadilophu yokugcina. Iingubo zokuhlambela zibonelelwa ukuya kwiindwendwe ezi-4.
Kwigumbi lokuphumla / igumbi lokutyela elilungiselelwe kakuhle uya kufumana iTV, isidlali seCD kunye nerediyo ye-FM.
I-Oakura Beach yindawo eyaziwayo yeSurf, Swimming & Fishing spot, efikeleleka ngokulula kule dilesi. Ikhosi yeGalufa yeKaitake ikwakuhambo olufutshane. Umkhondo wokuhamba unokukusa elunxwemeni ngaphambili ukuya kwiWeld Road nangaphaya. A elifutshane 5 imizuzu drive uya kuba nawe kwilali Oakura ukonwabela ububele odumileyo Butlers Reef Hotel okanye ikofu kwenye cafe ezahlukeneyo. Ivenkile eFour Square ikwakwilali eya kubonelela zonke iimfuno zakho zegrosari.